Denmark oo shir heer caalami oo Soomaaliya ku saabsan qabaneysa. - Wargeyska Faafiye
Denmark oo shir heer caalami oo Soomaaliya ku saabsan qabaneysa.
Dowladda Denmark ayaa ku dhawaaqday in ay marti galin doonto bisha November kulan heer caalami ah oo ku saabsan taageerida dib u soo celinta nabadda iyo amniga Soomaaliya.
Dowladda Denmark, ayaa ku yaboohday lacag dhan 2 boqol oo milyan oo lacagta dalkaas ah si loogu taageero dadaalada horumarinta iyo xassilinta Soomaaliya oo ay ku jiraan horumarinta caddaaladda, dhiirigalinta kubaca dhaqaale iyo shaqo abuurka, la dagaalanka burcad badeedda iyo soo celinta amniga. Author: Liban Farah
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsShariif Sh. Axmed oo ka hadlay doorashadaGrandmother declared dead comes back to lifeMadaafiic iyo qarax ay ku dhinteen dad rayid ah.Hagel resigns as defense secretaryR/Wasaaraha Ingriiska oo gabadhiisa Baar khamri Kaga soo tagay .